सेर बहादुर देवाले गरे यस्तो निर्णय अब वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ५० वर्ष: सही की गलत ? – List Khabar
Home / समाचार / सेर बहादुर देवाले गरे यस्तो निर्णय अब वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ५० वर्ष: सही की गलत ?
admin December 19, 2021 समाचार Leaveacomment 119 Views
आज बिहिबार बसेको प्रतितिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामा अहिलेको वृद्ध भत्ता ७० वर्ष माथि उमेरलाई घटाएर ६५ वर्ष बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
यो पनि पढ्नु होला कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुँदा नेपालमा प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको तेल उत्पादक सङ्घले जनाएको छ । नेपाल वनस्पती घ्यू तेल उत्पादक सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड पछि कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुँदा खाने तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको जनाएको हो ।
सुशान्तको पूर्व प्रेमिका अंकिताले विक्कीसंग गरिन् इन्गेजमेन्ट, एक अर्कालाई औंठी लगाउँदा सुशान्तकै गीत बजाइयो (भिडियो हेर्नुस्) एजेन्सी ।
अंकिता लोखंडे र विक्की जैनले मुम्बईको एक होटलमा धुमधामका साथ इन्गेजमेन्ट गरेका थिए । दुबैको इन्गेजमेन्टमा टिभी जगतका सबै ठूला सेलिब्रेटीहरु सहभागी भएका थिए । इन्गेजमेन्ट अविस्मरणीय बनाउन सुशान्त सिंह राजपुतको फिल्म राब्ताको टाइटल गीत ब्याकग्राउन्डमा बजाइएको थियो जब अंकिताले स्टेजमा विक्कीलाई औंठी लगाएकी थिइन् ।
Previous शुक्रबार,शनिबार,आईतबार बिदा गरिने नियम सरकारबाट पारित
Next सूर्यतर्फ उडेको नासाको यान, सुर्यको बहिरि सतहमा पुग्यो घाम छुँदै अमेरिकी यानले रच्यो नयाँ इतिहास!